सर्वश्रेष्ठ कुराहरू लण्डन गर्न अनि कसरी त्यहाँ प्राप्त गर्न | एक ट्रेन सेव
घर > ट्रेन यात्रा यूके > सर्वश्रेष्ठ कुराहरू लण्डन गर्न अनि कसरी त्यहाँ प्राप्त गर्न
सर्वश्रेष्ठ कुराहरू लण्डन गर्न अनि कसरी त्यहाँ प्राप्त गर्न
पढ्ने समय:3मिनेट(Last Updated On: 17/04/2020)
जब यो युरोप सबैभन्दा प्रसिद्ध क्यापिटल भ्रमण गर्न आउँछ, लन्डन हरेक पर्यटक गरेको इच्छा सूची माथि पक्कै छ र त्यहाँ लण्डन के गर्न धेरै कुराहरू छन्. यो एक लामो पायो गर्नुपर्छ, आकर्षक इतिहास; सुन्दर स्थलहरू र ठाँउहरु; र त्यहाँ के कुराहरू प्रशस्त त्यहाँ. तपाईं एक-सजिलो जाँदै हुनुहुन्छ कि पर्यटक जो थाहा प्राप्त गर्न चाहन्छ स्थानिय संस्कृति, वा साहस कर्म गर्ने व्यक्ति उत्तेजना लागि देख, लन्डन लागि भण्डारमा केही छ.
को पाठ्यक्रम, लण्डन गर्न के थाह भन्दा अन्य, यसलाई आफ्नो यात्रा को रसद बाहिर आंकडा महत्त्वपूर्ण पनि छ. रेल द्वारा त्यहाँ प्राप्त सबै भन्दा प्राकृतिक विकल्प मध्ये एक छ, विशेष गरी यदि तपाईं पेरिस जस्तै प्रमुख युरोपेली शहर देखि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, एम्स्टर्डम, वा बर्लिन. यहाँ लन्डन गतिविधिहरु र तपाईंलाई मदत गर्नेछ भन्ने रेल को एक सिंहावलोकन छ आफ्नो छुट्टी योजना:
लण्डन गर्न हाम्रो पसंदीदा कुराहरू
रूपमा लन्डन रूपमा ठूलो शहर मा, केही विकल्पहरू गतिविधिहरु को सूची तल साँघुरो लगभग असम्भव छ. तपाईंले सबै ठाँउहरु कहिल्यै देख्न र पकड हुनेछ सबै प्रामाणिक लन्डन अनुभव एक यात्रा समयमा. हामी अग्रिम आफ्नो प्राथमिकताहरू तय सिफारिस गर्छौँ किन हो.
कुराहरू खोज्न जसले तपाईंलाई ती लण्डन के गर्न लागि सम्बन्धित छन् किनमेल, विभिन्न बजार को हुनेछ आफ्नो भ्रमणको जोड. तपाईंले खोजिरहेको प्रामाणिक, स्थानीय खाना? को बोरो बजार जाँच र नमूना यसको मासु Delights, वा नजिकको रेस्टुरेन्ट मध्ये एक मा खान. तपाईंले केही विभाग स्टोर किनमेल लागि मूड मा थप हुनुहुन्छ भने, स्वतन्त्रता ठूलो ठाउँ छ. वैकल्पिक, केही सुन्दर प्राचीन मा लागि शिकार जाने Portobello रोड बजार.
लन्डन आफ्नो यात्रा एक शैक्षिक चरित्र बढी छ भने, शहर को सांस्कृतिक हटस्पट केही जानुहोस्. को पुनर्निर्माण उपस्थित शेक्सपियर गरेको ग्लोब लन्डन को टावर सिकेर गर्न, तपाईं के गर्न प्रशस्त हुनेछ. हामी पनि दक्षिण बैंक मा Tate आधुनिक मा आनन्द लिई समकालीन कला सिफारिस गर्न चाहन्छौँ, साथै Southbank केन्द्र गएर रूपमा.
लन्डन गाडिहरु गर्न UTRECHT
आन्ट्वर्प लन्डन गाडिहरु गर्न
स्ट्रासबर्ग लन्डन गाडिहरु गर्न
लक्समबर्ग लन्डन गाडिहरु गर्न
ट्रेन द्वारा लन्डन रही पेरिस बाट, एम्स्टर्डम, र बर्लिन
तपाईं लन्डन पुग्न सक्दैन पेरिस, एम्स्टर्डम, र बर्लिन सजिलै Eurostar मार्फत, सहरी र Thalys रेल. सुरु गन्तव्यहरू केही अरूले भन्दा लन्डन पुग्नु बढि प्राकृतिक तरिका हुनेछ. उदाहरणका लागि, तपाईं एक बोर्ड गर्न सक्छन् Eurostar उच्च गतिको प्रत्यक्ष पेरिस बाट लण्डन तालिम, दुई र आधा घण्टा भन्दा बढी र त्यहाँ एक सानो हुन.
जब यो एम्स्टर्डम र बर्लिन देखि लन्डन यात्रा गर्न आउँछ, एम्स्टर्डम देखि, तपाईं Eurostar निर्देशन लाग्न सक्छ वा अर्को राम्रो विकल्प पहिलो मार्फत ब्रसेल्स प्राप्त गर्न हुनेछ Thalys त्यसपछि लण्डन ब्रसेल्स मा Eurostar बोर्ड. को यात्रा चार घण्टा त्यो बाटो लिन्छ र रेल द्वारा एम्स्टर्डम देखि लन्डन पुग्न तेज तरिका हो.
रेल द्वारा बर्लिन देखि बेलायत राजधानी रही दुई परिवर्तनहरू आवश्यक थियो. यात्रा को अन्तिम खुट्टा एम्स्टर्डम देखि जस्तै हो, त्यसपछि Eurostar बोर्डिङ. तथापि, अर्को विकल्प गर्न बर्लिन देखि देखि यात्रा तालिम छ कोलोन, जहाँ तपाईं हुनेछ ब्रसेल्स एक रेल बोर्ड. यो छ तेज रेल बर्लिन देखि लन्डन यात्रा र कम त एक सानो लिन्छ 10 घन्टा र त्यसपछि के तपाईं लण्डन गर्न कुराहरू बारेमा सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ.
लन्डन प्राप्त गर्न तयार?
तपाईं लण्डन गर्न आफ्नो के मनपर्ने कुराहरू निर्णय गर्नुभएको छ भने हुनेछ, तपाईं मात्र यात्रा गर्न आवश्यक! रेल द्वारा त्यहाँ रही सजिलो छ, त्यसैले जाओ र एक शानदार छुट्टी लागि आफ्नो सिट बुक.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र केवल एउटा लिङ्क हामीलाई एक क्रेडिट दिन यो ब्लग पोस्ट गर्न, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-things-to-do-london%2F - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#यात्रा europetravel लन्डन रेल यात्रा uktravel
सर्वश्रेष्ठ गन्तव्यहरू युरोप मा एक सप्ताह समयमा यात्रा गर्न
ट्रेन यात्रा, ट्रेन यात्रा बेल्जियम, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा स्पेन, रेल यात्रा गर्नुभएको नेदरल्यान्ड्स, यात्रा युरोप
5 सबै भन्दा राम्रो प्राकृतिक तातो पानीका मुहानहरू मा युरोप
ट्रेन यात्रा, ट्रेन यात्रा अस्ट्रिया, ट्रेन यात्रा ब्रिटेन, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा हंगेरी, ट्रेन यात्रा इटाली